‘नाटकीय’ रुपमा भाँडियो एमाले माओवादी एकता, माओवादीले राख्यो नयाँ शर्त – Setosurya
काठमान्डौ । सहमति नजिक पुगेको भनिएको एमाले–माओवादी एकता र शक्तिको बाँडफाँडको विषय ‘नाटकीय’ रुपमा भाँडियो । र त्यसलगत्तै असर पनि देखियो, माओवादीको समर्थनमा हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । सानो आकारको मन्त्रिमण्डल पनि बनाए । तर, सरकारमा माओवादी भने सहभागी भएन ।
यस विषयमा प्रचण्ड निवासमा माओवादीका नेताहरुवीच अनौपचारिक कुराकानी भएको भईरहेको छ । एकीकृत पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के बनाउने भन्नेमा एमाले र माओवादी नेताहरुबीच फरक–फरक धारणा आएका छन् ।
यस्तो कुराकानीमा सहभागी माओवादीका एक नेताका अनुसार एमालेले वैचारिक रुपमा धेरै दवाव दिएपछि एकताको विषयमा ‘ब्रेक’ लागेको हो । एमाले नेताहरुले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई एकीकृत पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त स्वीकार गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
जवकि माओवादी नेताहरुले ‘२१औं शताब्दीको जनवाद’ लाई स्वीकारेर जानुपर्ने अडानमा छ । दुई पार्टीका नेताहरुबीच देखिएको यो सैद्धान्तिम मतभेद पार्टी एकता र सरकार गठनसम्ममा देखिएको छ ।
चुनावी तालमेलमा ६० र ४० प्रतिशत सीट ल्याएर एमाले र माओवादवीच गठबन्धन भएको थियो । तर, माओवादी नेताहरुले पार्टी एकतामा चाहिँ ‘फिप्टी–फिप्टी’ अर्थात आधा–आधाकै सूत्रमा अगाडि बढने निश्कर्ष निकालेका छन् ।
‘चुनावी गठबन्धन बनाउदा हामीले ६० र ४० वा ७० र ३० का कुरा गरेका हौँ । पार्टी एकतामा यही सूत्रले काम गर्दैन । हरेक कुरामा आधा–आधा हुन्छ ।’ अनौपचारिक कुराकानीमा प्रचण्डले बताएको माओवादीका एक नेताले सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल, पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीदेखि अन्य सवै शक्तिमा आधा–आधाको हिस्सामा मात्र सहमति जुटने ती नेताको दावी छ ।
अस्थायी शिक्षकको परीक्षा मिति तोकियो : परिक्षा दिने शिक्षकको नामावली सहित
यस्तो आयो एमालेको महत्वपूर्ण निर्णय: निर्वाचनको कमाण्डर अध्यक्ष केपी ओली, सवै शीर्ष नेता प्रत्यक्षका उम्मेदवार
वर्तमान सरकार घरमा पालिएको सुगाजस्तै:एमाले अध्यक्ष अाेली
चितवनबाट हारेका देवीलाई ओली र प्रचण्डको निम्तो, बालकोटमा भयो यस्तो सहमति
प्रहरीसँगको झडपपछि कमल थापा पुगे बालुवाटार
कुस्मा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरमा ४ /४ जनाको दाबेदारी
विप्लब नेतृत्वको नेकपाको बम बनाउने ठाउ सेनाको कब्जामा
विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा गृहमन्त्री पुग्दा यस्तो देखेपछी…..
पर्वतको आर्थरमा बृद्द भत्ता बांड्न प्रशासनको हस्तक्षेप
राष्ट्रपतिमा एमालेका खनाल र माओवादी केन्द्रका बादलको दाबेदारी
उपेन्द्र यादब भन्छन् – देशमा अब महाभारत हुन्छ
गिरिराजमणिको खुलासाः एमाले र माओवादी मिल्न नदिन को बन्यो भिलेन ?
छाती चेक गर्न अस्पताल छिरेका बिरामी अस्पतालमै मृत भेटिएपछि…
माओवादी केन्द्रको बैठकमा नारायणकाजी बम्किएपछि
शेर बहादुरलाई पछि पार्दै प्रकाशमानले गरे यस्तो दाबी !
मतगणनामा विवादः स्थगनदेखि कुटपिटसम्म
चुनाव घोषणाको सर्तमा एमाले संशोधनमा लचक हुने
स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि